Semalt Inotsanangura Sei Kuumba A Firiji MuGoogle Analytics
Google Analytics ibasa rakakurumbira uye rine ruzivo rinoita kuti iwe uone zvinyorwa uye ruzivo rwepamusoro uye nhamba dzekuti vashandisi vari kuita sei pawebsite yako. Zvinyorwa zviripo muGoogle Analytics zviri nyore kugadzirisa uye zvinogona kusikwa chero nguva. Pano unogona kuisa pane kana kusanganisira data yako analytics inorondedzera pamusoro. Somuenzaniso, pawakagadzira zvidzitiro zvinosasa maPs mashomanene uye zvinyorwa zvemukati zvevanyori vako, saka kune mikana yokuti mafirita ako haashandi zvakanaka uye anofanira kuchinjwa nekukurumidza. Iwe unogona kugadzira zvinyorwa zvisingabatanidzi mashoko kubva kune mamwe maguta kana nyika.
Ross Barber, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutungamiri, anotaura kuti nemafuta muGoogle Analytics, zvinoita kuti munhu wose aise kana kusanidza webhusaiti yakananga, achiita kuti hutano hwavo huve hwakanaka uye hitsva - fazer video slide online. Google Analytics inokupa mikana yakawanda yekutsanangura mafikisi ako ane ruzivo rwakakosha uye ruzivo..Iwe unogona kugadzirisa zvirongwa uye kuita kuti zvakanyanya kufambira mberi kuti zviwane zvakanakisisa uye zvakakodzera migumisiro.
Ita chinofananidzirwa firiji kana tsika yechirongwa
Pakusarudza firiji yakatarwa kana tsika yechirongwa, unofanira kubvumira Google Analytics imwe nguva kuitira kuti igone kugadzirira mitsara yako. Somuenzaniso, kana iwe une webhusaiti iyo inotengesa vana michina asi iwe unoda kuwana maonero kubva kune dzimwe nyika kana maguta, zvino iwe unofanirwa kubvisa dzimwe nzvimbo dzose uye kugadzirisa zvirongwa zvako maererano. Hazvingakanganisi kutaura kuti tsika yakashambadza ine nhamba yakawanda yezvasarudzo uye zvinhu zvaunosarudza kubva. Vanokubvumira kuti uise mafaira ako nenzira yaunogona kuisa pane iyo kana kusanganisira kutarisa kunowanikwa mavheeresi uye nzvimbo, hutano hwavo hwekukurumidza, geography, nezvimwe zviito. Nemuenzaniso, kana wakaronga zviitiko zvekubika zvekugara kuburikidza newebsite yako, unogona kufuta vaenzi vanobva kuguta rako kana guta kuti uwane mhinduro yakakodzera.
Sarudza bhodhi redhiyamu yako yakasarudzika firiji
Zvakakosha zvikuru kuyeuka kuti iwe unofanira kugara uchisarudza bhidhiyo yefaira yewaini yefaira kuti uwane mhinduro inoda. Dzinosanganisira uye dzisingabatanidzi mashomanana rega iwe unotsanangure mamwe mashoko, uye iwe unokwanisa kugadzirira yako Google Analytics mhinduro maererano. Kana iwe usingadi vamwe vanhu vemamwe nyika kana maguta kuti vashanyire ma webhusi enyu, unogona kungovhara ma IP aderesi. Nokuda kweizvi, unofanidza zita reguta iri muchikamu chepiritsi uye chengeta pane bhokisi rekudzivirira. Kunyanya, mabhatani ezasi uye mabhii maita kuti ujekese zvimwe zvinyorwa zvekubatanidza kana kusabvisa kubva kune zvinyorwa. Kana iwe usingadi mamwe maguta kuti aende kana kuona webhusaiti yako, unogona kungovhara maguta iwayo nekunyora zita mune iyo inosanganisira chikamu. Iyi sarudzo inobatsira kune avo vanoda mamiriro ekutarira munyika pamapeji avo ewebhu uye vanoda kuve nechokwadi chokuti zvinhu zvose ndezvechokwadi, zvechokwadi uye kusvika pakuratidza. Izvo "Tsvaga uye Shandisa" zvingasarudza iwe kuti uite nenzira iyo data yako inoratidzwa muGoogle Analytics. Unogona kugovera chikamu ichi mumapoka akasiyana-siyana zvichienderana nezvaunoda uye unogona kutora mafiritsi asina kushandiswa neavo vanoita kuti zvive zvakajeka uye zvigumisiro zvakanaka.